समाचार - ग्रीष्म Makeतुमा कसरी बनाउने जुन चिसो छैन र टेक अफ छैन!
ग्रीष्ममा कसरी मेकअप गर्ने जुन चिसो हुँदैन र टेक अफ हुँदैन!
गर्मी को शुरुवात पछि, म जस्तै परीहरु को लागी सबैभन्दा ठूलो टाउको दुबै जो सौंदर्य को पछि लाग्न रोक्न छैन गर्मी मा उनीहरुको मेकअप उतार रहेको छ, विशेष गरी जब मेकअप तातो छ र मेकअप पग्लिन्छ। आधा घण्टा गम्भीर मेकअप पछि, यो ठूलो चित्रित अनुहारमा परिणत हुन्छ। यो वास्तवमै सत्य हो। ठूलो स्वरले कराउँदै!
यो समस्या सामान्य हो र सबै छालाका केटीहरूमा हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, आज हामीले विशेषज्ञ सेलिब्रिटी मेकअप कलाकार शिक्षकहरूलाई ग्रीष्मकालदेखि चिरस्थायी मेकअपको रहस्यहरू चोरी गर्न आमन्त्रित गर्दछौं!
सबै भन्दा पहिले, केहि आधारभूत प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण गरौं:
तपाईं किन आफ्नो मेकअप बन्द गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ तीन कारणहरू छन् जसले हामीलाई हाम्रो श्रृंगार बन्द गराउँदछ: पसिना, सेबम, र छाला डिहाइड्रेशन।
पसिना एक चीज हो जुन हामी ग्रीष्म avoidतुमा टाढा रहन सक्दैनौं। धेरै साना बहिनीहरूले भने कि उनीहरूको मेकअपलाई लामो समय सम्म बनाउन तिनीहरू मेकअप उत्पादनहरू पनि प्रयोग गर्छन्, जस्तै लूज पाउडर, पाउडर, र मेकअप स्प्रे, तर तिनीहरूले मेकअपलाई बन्द गर्नुपर्दछ वा यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ। समस्या यो कहाँ छ मा निहित?
इन्टरनेटमा मेकअप फिक्स गर्ने हजारौं तरिकाहरू छन्, तर तपाई कस्तो प्रकारको छाला हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ, र उपयुक्त मेकअप सेटिंग उत्पादन र विधि छनौट गर्नुपर्दछ, अन्यथा सुख्खा छाला मात्र सुक्खा र सुक्खा हुनेछ, र तेल छाला। छिटो मेकअप बन्द लिन्छ!
उदाहरण को लागी, सुक्खी छाला स्याण्डविच सेटिंग विधिका लागि उपयुक्त छैन, बस जोन ढोल पाउडर स्थानीय रूपमा टी जोनमा प्रयोग गर्नुहोस्; तेल छाला को लागी, मेकअप सेट गर्न लूज पाउडर सेटिंग स्प्रे को एक लेयर प्रयोग नगर्नुहोला, तर मेकअप अनुहार अधिक अस्थायी पाउडर मास्क हुनेछ!
मेकअप गर्नु भन्दा पहिले उत्तम छाला हेरचाह
छालाको उत्तम अवस्था भनेको यो तटस्थ र तेल नभएको हो, तर यस प्रकारको छाला दिनदिनै विकास गर्न गाह्रो मान्न सकिन्छ। हामीसँग मूलत: शुष्क छाला, तेल छाला वा मिश्रित छाला हुन्छ।
गर्मीमा छालामा चिसोमा नमी शोषण गर्न बाधकको ठूलो हिस्सा हो किनभने स्ट्र्याटम कोर्नियम धेरै बाक्लो छ, त्यसैले म सफा गरिसकेपछि टोनरमा भिसाएको सूती प्याडले छाला बिस्तारै सफा गर्थें, र यसलाई घाँटीमा र पछाडि लिन्थें कान यसका लागि दुई कारणहरू छन्। पहिलो अनुहारको धूलो र फोहोर हटाउनु हो, र दोस्रो छालालाई शान्त पार्नु हो र यसलाई पछिको छाला हेरचाह द्वारा राम्रोसँग अवशोषित गर्नु हो।
यस पछि, दोस्रो टोनर अनुप्रयोगसँग जारी राख्नुहोस्, र डबल-लेयर मॉइस्चराइजिंग प्रभाव राम्रो हुनेछ। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि गर्मीमा तापमान वृद्धिको हरेक डिग्रीले अनुहारमा तेलको मात्रा २०% ले बढाउनेछ। पर्याप्त पानी थपेमा मात्र पानी र तेलको सन्तुलन अत्यधिक असंतुलित हुन सक्दैन।
किनकि तपाईले अनुगमनमा सनस्क्रीन र बेस मेकअप लागू गर्नुपर्नेछ, तपाईले दिनको सार र क्रीम उत्पादनहरूको लागि ताजा र मोइश्चराइजिंग शैलीहरू छान्नुपर्नेछ। थोरै तेल नियन्त्रण प्रभाव उत्तम हो, अन्यथा पनि चिल्लो र अनुहार पछि सनस्क्रीन फिल्म गठन प्रभावित गर्दछ। बेस मेकअप छालामा टाँस्न सजिलो छैन!
१. सही मेकअप उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस्
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, उपयुक्त छालाका प्रकार र उत्पादनहरू विभिन्न छालाका प्रकारहरूका लागि फरक हुन्छन्, र तिनीहरू मूल रूपमा दुई प्रकारमा विभाजित हुन्छन्: सुख्खा छाला र तेल छाला। बजारमा सेटिंग उत्पादनहरू लुग पाउडर, पाउडर केक, स्प्रे सेट, आदि समावेश गर्दछ।
लुज पाउडर र मह पाउडर केक केवल विभिन्न रूपहरूमा देखा पर्दछ। एउटा घरेलु प्रयोगको लागि पाउडर हुन्छ, र अर्कोलाई बाहिर राख्नको लागि केकमा थिचिन्छ। वास्तवमा पाउडरको मुख्य तत्त्वहरू पनि सिलिका, टाल्कम पाउडर, टाइटेनियम डाइअक्साइड, जिंक अक्साइड, इत्यादि हुन्। हो, उनीहरूले अनुहारमा तेल लगाउँछन्।
पाउडरको अंग्रेजी नाम पाउडर फाउन्डेसन हो, जो एक पाउडर फाउन्डेशन उत्पाद हो। तपाईं यसलाई फाउन्डेशन मेकअपको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र पछि मेकअप सेट गर्न तपाईंले पाउडर उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुपर्दैन!
त्यहाँ मेकअप स्प्रे सेट गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। चाहे विज्ञापनमा कति सार तत्वहरू थपिए, मुख्य शरीर भूतपूर्व चलचित्र हो। यस फिल्मले तपाईंको अनुहारमा सुरक्षा फिल्म बनाउँदछ। ग्लोसमा यसले तपाईंको अनुहारमा श्रृंगार परिवर्तन गर्दैन।
सेटिंग स्प्रे को फाइदा यो हो कि यो मेकअप अनुहार को पाउडर भावना कम गर्न र यसलाई अधिक प्राकृतिक बनाउँदछ। नोक्सान भनेको के हो भने जतिसुकै तेल कन्ट्रोल सामग्रीहरू थपिए पनि वास्तविक प्रभाव लुगुने पाउडर पाउडर केक तेल नियन्त्रण र सेटअप मेकअपको प्रभावको रूपमा राम्रो हुँदैन।
मेकअप सेटिंग स्प्रे अधिक बहुमुखी पनि छ, जस्तै यो फाउन्डेशनमा मिसिन सक्दछ फाउन्डनलाई स्थायी र चम्किलो बनाउन, र मेकअप सेटिंग स्प्रे बेकिंग विधि पछि पाउडर भावना कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर y1s1 तेल छाला एक्लै स्प्रे सेट गर्नका लागि उपयुक्त छैन, यो अधिक तेल र सुक्खा छालाको लागि बढी उपयुक्त हुनेछ।
२. विभिन्न छाला प्रकारका लागि मेकअप कसरी सेट गर्ने
सामान्यतया भन्नुपर्दा, सुक्खी छालाले गालामा त्यति तेल उत्पादन गर्दैन, र टि जोन र गालहरूलाई तेल छोड्न र मेकअप हटाउन सजिलो हुन्छ। शिक्षक Jianxing आंशिक मेकअप को लागी एक fluffy लूज पाउडर ब्रश को उपयोग गर्न को सिफारिश, तब झिम्क्याउन र प्रविधिको ध्यान दिनुहोस्!
थोरै मात्रामा छाडा पाउडर डुब्नुहोस् र हल्का रूपमा यो टी जोन, नाक, चिन र बाहिरी समोच्च किनारामा थिच्नुहोस्।
किनकि सुक्खा छालाले उत्पादन गरेको तेलको मात्रा अहिले तुलनात्मक हिसाबले सानो छ, त्यसैले ब्रशमा रहेको बाँकी छाला पाउडर स्वाइप गर्नुहोस्। बाँया र दाँया अनुहारहरू तुलना गर्दा, यो एकदम स्पष्ट छ कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि बायाँ अनुहार microdermabrasion को श्रृंगार प्रभाव हो, बिल्कुल!
तेल छाला को लागी, यसलाई तेल को नियन्त्रण गर्न छाडा पाउडर + मेकअप सेटिंग स्प्रे प्रयोग गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ असफल बिना मेकअप बनाए। शिक्षक जिआन्सिingसँग मेकअप स्प्रे कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि भन्ने कुरा छ।
प्रसिद्ध T र X स्प्रे विधिहरू वास्तवमा मेकअप सेटिंग स्प्रेका लागि उपयुक्त छैनन्। हामीले प्रयोग गर्नुहुने अवाइन स्प्रे जस्तो नभई, जुन ग्यास ट्या tank्क हो, स्प्रे फोर्सको तुलनात्मक रूपमा कडा दायरा हुन्छ। Jianxing मेकअप को लागी तीन बिन्दु सेटिंग को उपयोग सिफारिश गर्दछ।
Stand. ठिक मेकअप स्ट्यान्डबाई समय विस्तार गर्न
यदि हामीले पहिले नै मेकअप र बेस मेकअपमा धेरै समय खर्च गरिसकेका छौं भने, त्यहाँ उच्च तापमानमा मेकअपलाई हटाउने कुनै उपाय छैन। मेक-अप पुनःपूर्ति हाम्रो अतिरिक्त समय विस्तार गर्न एक आवश्यक विकल्प भएको छ।
हामीले बहिनीहरूबाट पनि धेरै प्रश्नहरू संकलन गरेका छौं। साधारणतया, तपाइँ जति मेकअपलाई छुनुहुन्छ, भारी मेकअप हुनेछ। मेकअप पछि मेकअप तेलमा आउनेछ र मेकअप छिटो लिन्छ। त्यसोभए के समस्या छ?
बाहिर मेकअप लागू गर्नुको पहिलो चरण भनेको मेकअप लागू गर्नु अघि अनुहारमा थप तेल लीन गर्नु हो। कति व्यक्तिले यो चरण गरेनन्, कृपया आफ्नो हात उठाउनुहोस्, अन्यथा पाउडर सिधा चिल्लो अनुहारमा चुम्बन गर्नु स्वाभाविक हो, र यसले लामो समय लिन सक्दछ। मेकअप टुक्रा गरेर धेरै डरलाग्दो हुन्छ!
तर इमान्दार हुन, यो बाहिर जाँदा तेल शोषक टिशू ल्याउन साँच्चै समस्याग्रस्त छ। शिक्षकले मलाई मेकअप बाहिर छुन एक चाल सिकायो।
पहिले कागज तौलियाको एउटा टुक्रा लिनुहोस् र यसलाई उल्टाउनुहोस्, यसलाई विकर्ण र विकर्ण फोल्ड गर्नुहोस् शोषक कागज बदल्नको लागि, र त्यसपछि तेल अवशोषित गर्न थिच्नुहोस्। निम्न चित्र मा देखाइएको कोण मा, गाल, नाक, र T क्षेत्र मा थिच्नुहोस् अधिक तेल लिन।
निधार र ठोडी ठीक गर्न थिच्नुहोस्, अनुहारमा औंलाहरू थिच्नुहोस्, र अनुहारको अर्को पट्टि पल्टाउनुहोस् र अर्को पक्षमा टिशू प्रयोग गर्नुहोस्।
सबैभन्दा कठिन हिट क्षेत्र जब तपाईं आफ्नो नाक बन्द गर्नुहुन्छ जब तपाईं नाक लिनुहुन्छ, पखेटा जोड्ने बाहेक, नाक पनि नाकको अंश हो जुन तेल चमक जम्मा हुन्छ। नबिर्सनुहोस्!
तेल अवशोषित पछि, यो पाउडर मा राख्नु स्वाभाविक थियो, र श्री Jianxing पनि उसलाई एक विशेष टच-अप टेक्निक दिए। यदि तपाइँ सिधा मेकअप टच गर्न पाउडर पफको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पाउडरको मात्रा तुलनात्मक रूपमा धेरै हुन्छ, जसले सजीलै मेकअपलाई धेरै भारी महसुस गर्न सक्दछ, र यो सामाजिक दूरीको अन्तर्गत प्रकोप हो!
पाउडर पफ रोलिंग तरिकामा रोल गर्नुहोस् र यसलाई मेकअपको सबैभन्दा गम्भिर भागमा हल्का रूपमा ब्रश गर्नुहोस्, ताकि मेकअप अझ सटीक हुनेछ र धेरै पाउडर होइन!
गालाहरूको लागि, अगाडिको टच-अप पछि बाँकी पाउडर मात्र फ्लिक गर्नुहोस्, ताकि टच-अप भारी, हल्का र अधिक प्राकृतिक नहोस्!
पोष्ट समय: Jul-14-2021
यो नानचg्ग वेइटी टेक्नोलोजी कं, लि। का कलोसिल ब्यूटी ब्रान्ड हो। झूटा eyelashes, eyeliner, लिप ग्लोस, आईशैडो, काजल आदि निर्माणमा विशेषज्ञता। विविध सौन्दर्य श्रृंगार उत्पादनहरू हामीबाट छनौट गर्न सकिन्छ। कालोकिल्स ब्यूटी ब्रान्ड २०१ 2019 मा स्थापित भएको थियो, तर हामीसँग करीव १० बर्षको सौन्दर्य श्रृंगार निर्माण र निर्यात अनुभव छ। अहिलेका लागि हामीसँग 000००० वर्ग मीटर कार्यशाला र १०० भन्दा बढी स्थिर कामदारहरू छन्। हाम्रो वार्षिक निर्यात मूल्य $ 000०००,००० भन्दा बढी हो। आशा छ कि हामी दीर्घकालीन व्यापार सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दछौं र आपसी लाभलाई सत्य बनाउँदछौं।
बरौनी विस्तार, आईलाइनर, आँखा ल्याश, बरौनी विक्रेताहरू, गलत eyelashes, मिंक कोर्रा,